Af Soomaali | Vihreät Naiset - Gröna Kvinnor
Dumarka oo dhan isku mid ma ahan. Waxaa jira hablo yar yar iyo dumar reera leh, qaar kaligood dagan iyo qaarn qoysas waaweyn leh. Dumarka finishka waxaa ku jira kuwa halkan ku dhashay oo waligood daganaa, iyo kuwa wadanka u soo guuray oo halkan nolol cusub ka bilaabay. Vihreät Naiset(dumarka cagaarka) waxay ku noolyihiin baadiyaha ama duurarka ama magaaloyinka. Waa qaar wax bartaan, qaar shaqeystaan iyo kuwa caruur korsadaan. Arrinta isku keen keeneysa oo na mideyneysa waa in aan mustaqbal rabno in aan u dhisno carruurteena iyo dadka naga dambeeya, in aan rabno arrimaha in aan wanaajino.
Waxaan rabnaa bulshad dadka isku xuquuq ay leeyihiin oo ay simanyihiin, bulsho dadkeeda ka warheyso marka xanuun uu qabto, marka ay yaryihiin iyo marka ay waayeel noqodaan. Waxaan rabnaa dhirta in ay ka faa’iidaan macal dadka anaga naga dambeeya iyo carruurteena. Naagta cagaarka ma aha mid aamusaan marka ay khalad la kulanto, waa geesiyad ka hadasha macal arrimaha adag.
Vihreät Naiset Ry waxaa lagu aasaasey Tampere 1993, Vihreät Feministit ry howshooda si ay u sii wadaan. Vihreät Naiset ry waxay noqdeen urur quwad leh aadna aktif u ah, waxaa hoostooda gala 16 urur oo wadanka oo dhan ku fidsan.
Vihreät Naiset ry waa janal dumarka codkooda ay ka dhiiban karaan, kana qaybqaadan karan arrimaha bulshada khuseeya si bulshada mid cadaalad ku dhisan ay u noqoto. Vihreä Femisimi wuxuu disaa tiirarka bulshada si bulshada ay u ahaan karto mid cadaal ku dhisan iyo sinnaan kana madax bannaan dhibaatoyinka cunsurinimada iyo sinnaan la aanta ay keeni karaan.
Dumar in aynu nahay waa quwad nagu saacideyso in aan meel sare gaarno, ma ahan wax naga hor istaago horumarka nolosha.
Ku soo biir barnaamishkeena!